Igbo, Romans, Lesson 008 -- The Righteousness of God is Established and Realized in us Through Constant Faith (Romans 1:16-17) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 008 (The Righteousness of God)
NDI ROM 1:16
16 N'ihi na ozi ọma Kraist adighi-emem: n'ihi na ọ bu ike nke Chineke rue nzọputa nye onye ọ bula nke kwere, na ndi-Ju na mbu onye Grik.
Pol ama ọfiọk ete ke “etop” ama ọdiọn̄ọ onyụn̄ enyene inem inem ke Rom, koro ediwak etop, ke mme edikwọrọ eti mbụk ke ubon edidem, emi enemde ikpọ owo ibuot.
Ọ zisara ozi ọma banyere nzọpụta n'otu ọkwa nkwupụta banyere eze, dị ka a chọrọ ikwu: “Ihere adịghị eme m, nke na-esite na Palestine, obere ógbè. Kama m na-eweta ya n’etiti isi obodo, n’ihi na m na-ezisa gị ozi ọma na ọ bụ naanị otu Chineke nwere Ọkpara pụrụ iche, onye si n’aka ya tupu afọ ndụ niile, ma bụrụ onye bịara n’onwe anyị ịnọ nso n’ebe Chineke nọ, iji gbapụta mmadụ niile n’ọnwụ ya na mbilite n’ọnwụ ya. Akwụkwọ ozi m enweghị mkpesa na amụrụ nwoke nwụrụ anwụ nye Siza na-anwụ anwụ, mana o nwere akụkọ obi ụtọ nke ọmụmụ nke Ọkpara ebighi-ebi nke Nna mgbe ebighi-ebi. Ọ bụrụ n’ozi ọma banyere ozi ọma ewetara gị ozi ọma banyere mmeri nke ndị agha Rom, ma ọ bụ kọsara gị ihe omume eze ma ọ bụ nri iji mee ka afọ ju ìgwè mmadụ, a ga m ewetara gị ozi ọma na agbapụtawo ihe niile dị n’etiti mmadụ na mmehie, ọnwụ. Setan, iwe Chineke, na ikpe ya. Ozi ozioma m kariri Oziọma ndị Rom niile, maka na ọ bụ nke ụwa niile, nke dị elu, nke na-adị ebighi-ebi, dị ike, buru nnukwu ibu. Ọ dịghị n'elu nkà ihe ọmụma, akwụkwọ, ma ọ bụ olileanya efu, kama ọ dabere na otu onye”.
Ndị Rom amaghị ọtụtụ okwu pụtara “Kraist” dịka ndị Juu siri nye ya. Ha ghọtara ihe ọ pụtara dịka “onye e tere mmanụ”, nke bụ utu aha enyere Siza, ebe, na mgbakwunye na ọrụ obodo ya, a na-ewere ya dị ka nnukwu onye nchụàjà. Siza jikọtara onwe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, agha, na ọrụ iwu kwadoro yana ọrụ ime ka igwe mmadụ dị n'otu na chi na mmụọ nke mba, dịka a ga - asị na ọ bụ onye ogbugbo maka ngọzi na udo niile.
Otodi, Kraist bu onye nwe ndi nwayi, nke enyere ike nile n’eluigwe ma nelu uwa, nihi na obu onye isi nchu aja di, ya na obia onye ogbugbo anyi na Chineke.
Site na ọkwa a na mbido ozi ọma ya, Pọl ekwughi na nwa nwoke nke Kraist na Chineke na ọdịdị ya dị ọcha, kama ọ kọwakwuru ọrụ ya dị ka Onye-nwe, Onye-ikpe, Eze, Onye-ọchịchị, na Onye ndozi, onye naanị ya kwesiri inweta aha ahụ. : “Onye nzọpụta nke ụwa,” nke n'oge ahụ bụ naanị nke ndị Sesaria.
Obi uto a banyere Ọkpara Chineke na ije ozi ya dị iche iche abụghị echiche nkịtị. Ọ bụ ike mgbawa nke karịrị ike ụwa niile, n'ihi na ozioma nwere ike nke Chukwu. Onye nweayi n’onwe ya no n’ozi oma. Ọ na-ekwu site na mkpụrụedemede ojii ahụ, na-eke ndụ ọhụrụ na ndị na-anụ ya ma na-akpọghachi ndị a kpọrọ. Ya mere, etinyekwala akwụkwọ Akwụkwọ n'otu ọkwa na akwụkwọ ndị ọzọ na shelves gị, kama bulie ya ma tinye ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, n'ihi na akwụkwọ a na-akatọ akwụkwọ ndị ọzọ niile. Ozi Ọma zuru oke n’onwe ya, dịka Chineke zuru oke ma jupụta n’ike iji wulite elu-igwe ọhụụ.
Ike nke Chineke abiaghi uwa, site n’ozi oma Kraist, ibibi uwa ojo anyi, kama izobe ya, nihi na Chineke choro ka azoputa mmadu nile, ka ha bia mara n’ezi okwu. Nna anyị nke eluigwe abụghị onye ọchịchị aka ike. Ọ naghị amanye onye ọ bụla ịnabata ozi ọma nke Ọkpara ya, kama ọ na-enye eziokwu ya onye ọ bụla n'efu. Onye obula nke meghere obi ya n’okwu nke Kraist, ma tukwasi ya obi, na enwe ahu ike nke Chineke. Onweghi nzoputa n’enweghi okwukwe. Onye ọbụla kwere na ya na Ọkpara Chineke dị n'otu, onye tinyere chi ya na onye kwere ekwe, ma na-asachapụ, na-edo ya nsọ, ma na-ewulikwa ya.
Okwukwe n’ime Kraist n’eme ka nzoputa ebighebi n’onye obula nke g’eji obi ya nye ya; ntụkwasị obi na Ọkpara Chineke bụ naanị ụzọ maka nzọpụta. Site n'okwukwe, onye kwere ekwe na enweta anata mgbaghara na mbilite n’ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ. Ya mere okwukwe bu ihe di nkpa na akwukwo ozi ahu nye ndi Rom, nihi na okwukwe i dighi amataghi Chineke, ma obu inwe ike ya. Onye kwere, aghoghi onye agu n’onye ezi omume ma ndu n’ezie.
Ndi Ju nwetara eziokwu a mara nma, obu ezie na otutu n’ime ha juru Kraist, kpoo ya asì ma kpọgide Ya n’obe. Agbanyeghị, nhọrọ ndị dị umeala n'obi mara ya ma kwere na ya. Ha juputara na Mmuo Nso, wee no n’onyinye nke Chineke. Ike nke Atọ n’Ime Otu, ọbụlagodi taa, bi n’ime mmadụ site na ọgbụgba ama nke ndịozi mbụ.
Mgbe obere nke ndị Juu nabatara nzọpụta nke Kraịst, igwe mmadụ ndị Grik na mba ndị ọzọ, bụ ndị meghere obi ha na ozioma nke nzọpụta, soro ha. Ha chọpụtara na ozi a abụghị okwu efu, kama juputara n'ike nke Chineke, nke na-ejikọ ndị kwere ekwe na Kraist dị ndụ na ọgbụgba ndụ ebighi ebi.
Nwanne m nwoke, oburu na iguru ozi oma nke Kraist, were obi gi meghe okwu ya, kwere na Chi nke Jisos, ma soro ya kparita uka n’ekpere gi, I gha amata na Kraist ahu ekpogidere n’onwu bu ezi Onye nzoputa na onye nchu aja. Dike nke bu Eze, na Onye Mgbaputa nke uwa. Yabụ, nwee obi ike ma wulie ndụ gị kpamkpam na ozi ọma ka e wee bulie ike nke Chineke n’adịghị ike gị.
EKPERE: Anyi n’eto Gi Chineke, Nna, Okpara, na Mmuo Nso, n’ihi na ikwusa onwe gi na ozioma nke Kraist, I na-asacha anyi n’okwukwe, ma biri n’ime anyi n’iile. Anyi n’ekelekwa gi n’ihi na ike gi na aru oru zuru oke site n’akwukwo leta nke ndi Rom, si na akwukwo nile di n’Abu. Meghee anya anyi na uche anyi ka anyi nuru olu gi, tuo gi obi, nyefee ndu anyi kpam kpam n’inye gi na ndu gi.
Kedu nkwupụta dị na amaokwu nke 16 ka ị na-ewere dị ka nke kachasị mkpa? N'ihi gịnị?
Page last modified on January 25, 2021, at 08:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)